“M’Foot Fokontany”: miaraka ny baolina kitra sy ny fanabeazana - ewa.mg
“M’Foot Fokontany”: miaraka ny baolina kitra sy ny fanabeazana
Foot - News - Sport - “M’Foot Fokontany”: miaraka ny baolina kitra sy ny fanabeazana
Vita, ny 21 avrily teo, ny dingana voalohany “M’Foot Fokontany”, nifanaovan’ny ankizy 13-15 taona, natomboka ny 30 marsa ka nandraisan’ny ekipa anjara niisa 75 tany am-boalohany avy amina boriborintany enina eto Antananarivo.
Hanomboka ny 27 avrily izao ny dingana faharoa fifanintsanana eo amin’ireo ekipa enina voalohany isaky ny boriborintany sy ireo enina voafantina ahitana ireo ankizy mpilalao mahay, nofantenana avy amin’izay nihintsana ny dingana voalohany.
Vita, omaly, ny fisarihana ireo ekipa telo isam-bondrona amin’izao dingana manaraka izao, natao tao amin’ny Skate Park Antanimena, nahitana ireo mpanohana isan-tsokajiny (Airtel, Total, Sanifer, Jumbo Score, Supermaki, Big, Aro, BOA) miaraka amin’ny Alefa Barea, mpikarakara ny fifaninanana. Kendrena koa ny fanabeazana sy ny fijerena ny lafiny sosialy ho an’ireo ankizy ireo hiomana ny hoavy ka singa iray lehibe ny fanohanana azy ireo amin’ny fanatanjahantena. Antony iray lehibe koa nisafidianan’ny mpanomana ny kianja manara-penitra (synthétique) any Andralanitra, misy ny toby Akamasoa, nifampiresahana tamin’ny mpitantana, ny mompera Pedro.
“Mahafaly anay ny mandray anjara ho fanabeazana ireo ankizy ireo amin’ny baolina kitra, taranja fanatanjahantena mampiombona. Vonona hatrany izahay manohana, hanomana sy hampivoatra ireo tanorantsika ireo miainga avy any amin’ny fokontany misy azy avy”, hoy ny filohan’ny mpanohana Alefa Barea, Ramisamanana Lova.
Raha mpilalao fito isaky ny ekipa no nifanandrina tany amin’ny dingana voalohany, sivy kosa ny handray anjara amin’izao manaraka izao. Ny 12 mey ny lalao famaranana eny amin’ny toby Akamasoa ihany.
Ireo enina voalohany isaky ny boriborintany :
Boriborintany 1 : CF TFC Anatihazo Isotry; Boriborintany 4 : Ouest Mananjara
Boriborintany 2: JSM Morarano ; Boriborintany 5 : FC Zandrikely
Boriborintany 3 : FC Betongolo ; Boriborintany 6 : Sport 6 City
Ireo no hifanintsana amin’ny ekipa voafantina.
L’article “M’Foot Fokontany”: miaraka ny baolina kitra sy ny fanabeazana a été récupéré chez Newsmada.
Handingana ny sakana voalohany eo amin’ny fifaninanana Afrikanina ny ekipan’ny Elgeco Plus sy ny Cnaps Sport, solontena malagasy amin’ity taom-pilalaovana ity. Hotanterahina anio ireo lalao miverina ho an’ireto ekipa roa ireto ka any Zimbaboe no hanafika ny tompondakan’i Madagasikara, raha any Guinée Equatoriale kosa no hiady ny Elgeco Plus. Anio amin’ny 4 ora hariva (amin’ny 6 ora eto Madagasikara) no hiakatra ny kianjan’ny Estadio de Malabo ny ekipan’ny Elgeco Plus, tompon’ny amboaran’i Madagasikara. Manana tombony tamin’ny fandresena tamin’ny isa 3 noho 1, nandritra ny lalao mandroso, ny ekipan’i Robson Hubert na i Bob, mpanazatra ny Elgeco Plus. “Fandresena no tanjonay amin’ity dia ity. Salama avokoa ireo mpilalao ary isan’ny antony nandehananay nialoha ny mba tsy handreraka ireo mpilalao. Ny ampitson’io lalao io (ndlr: alakamisy) no hitodi-doha izahay ary mino aho fa fandresena no hoentina mody”, hoy i Robson Hubert. Mila mitady fandresena kosa ny Cnaps Sport Itasy amin’ny lalaon’izy ireo sy ny FC Platinium avy any Zimbaboe ao amin’ny kianjan’ny Zvishavane, any Mandawa, 250 km miala an’i Hararé. “Nahafaty baolina izy ireo taty amintsika. Nahoana no tsy hahafaty ihany koa isika any amin’izy ireo? Azo atao tsara ny mitady fandresena hiakarana eo amin’ny dingana manaraka”, hoy i Patrick Randriambololona na i Tipeh, mpanazatra ny Cnaps Sport. L’article BAOLINA KITRA – AFRIKANINA :: Ho fantatra anio ny ho avin’ny Elgeco Plus sy ny Cnaps Sport est apparu en premier sur AoRaha.
Rugby : Ekipa tsy namerin-taona mihitsy ny Mang’Arts
Fileovana nahavita dingan-dava teo amin’ny fifaninanana rehetra nolalovany ny Mang’ Arts, taranja rugby. “Ekipa tsy namerina kilasy izahay fa nifindra foana”, hoy i Herisoa Philippe Olivier, filohany.Gazety Taratra (*): Iza moa ny Mang’Arts, avy aiza ary ho aiza?I Herisoa Philippe Olivier (-): Ekipa niforona teto Man­jakaray, ary niainga tany amin’ ny seksiona Avaradrano. Feno enin-taona, amin’ity 2020 ity, ny Mang’Arts ary izao tonga aty amin’ny D1 izao. Fileo­vana tsy namerin-taona mihitsy tamin’ireo sokajy rehetra nolalovany fa niakatra hatrany. Mpilalao avy eto Manjakaray avokoa ny ato amin’ny Mang’ Arts, izay avy amin’ny ATM sy ny FTM ary ny JSM.*: Inona ny dikan’ilay hoe: Mang’Arts?-: Tendrombohitra iray avo be no dikany, ary niainga ta­min’izany ny hevitra namo­ronana ny ekipa, izay nanana ny sary famantarana sambon-danitra tany am-boalohany. Dikany, sady mandeha mafy no miakatra avo. Hiezaka ho sangany ao amin’ny D1 na hi­tazona izao toerana misy anay izao. Na izany aza, tanjona ny handrombaka fandresena.*: Hiova endrika ve ny Mang’Arts, amin’ity. Hisy mpilalao vaovao?-: Tsy azo atao tsinontsi­nona ny mpilalao efa naha­zatra satria taninketsa ary vy nahitana sy angady nanana izao vokatra izao, saingy tsy maintsy manatevina ahafahana manatanteraka ilay tanjona. Na izany aza, mpilalao avy eto Manjakaray ihany no alaina. Eo koa ireo nanatevina ny klioba hafa, saingy mipetraka eto avokoa.*: Ahoana ny rafitry ny Mang’Arts? -: Tsy misy karama ato fa fitiavana no hanaovana za­vatra. Ho an’ny mpilalao, ny vatan-tenany fotsiny no entiny fa ny klioba avokoa no misa­hana ny rehetra toy ny fanamiana, ny “godasse”, ny sakafo aorian’ny fanazarantena sy ny sisa. Misy ny fankasitrahana hatolotra azy ireo aorian’ny lalao ary mitovy avokoa ho an’ny rehetra. An­koatra izany, nomena fa­hazoan-dalana ma­mily izy ireo…*: Ambarao ny mpamaky antsika ny fiatrehan’ny Mang’Arts ny fihiboana?-: Ho an’ny tenako aloha, tsy tena afaka mihiboka tanteraka noho ny asa aman-draharaha fa ny vady aman-janaka no manao izany. Ho an’ireo mpilalao, nanatanteraka izany toy ny olon-drehetra, saingy ampirisihina hatrany hanao fanazarantena mitokana.*: Ny hafatry ny filohan’ ny Mang’Arts?-: Ho an’ny vahoaka mala­gasy aloha, tsy angano na sangisangy ilay aretina. Aleo mi­soroka foana toy izay mitsabo. Aza atao kitoatoa ny toroma­rika fa araho sy tanteraho an­tsakany sy andavany. Ho an’ny mpanao fanatanjahantena rehetra, miomana hatrany ha­hatratra ny tanjona fa tsy mitovy ny olona tsara fanomanana sy ny mipetra-potsiny.Nangonin’i TorcelinL’article Rugby : Ekipa tsy namerin-taona mihitsy ny Mang’Arts a été récupéré chez Newsmada.
Ligue 1 Conforama - Saison 2018/2019 - Andro faha 17 Paris Saint-Germain - Montpellier Hérault SC (-) Angers SCO - Girondins de Bordeaux (-) EA Guingamp - Amiens SC (1-2) Nîmes Olympique - FC Nantes (-) Stade Rennais FC - Dijon FCO (2-0) Toulouse FC - Olympique Lyonnais (-) RC Strasbourg Alsace - SM Caen (2-2) LOSC - Stade de Reims (1-1) AS Monaco - OGC Nice (-) AS Saint-Etienne - Olympique de Marseille (-) Buteurs : Eddy GNAHORE (63' - Amiens SC) / Etienne DIDOT (70' - EA Guingamp) / Stiven MENDOZA (81' - Amiens SC) / Benjamin BOURIGEAUD (69' - Stade Rennais FC) / Hatem BEN ARFA (90' - Stade Rennais FC) / Pablo MARTINEZ (5' - RC Strasbourg Alsace) / Fayçal FAJR (22' - SM Caen) / Lebo MOTHIBA (23' - RC Strasbourg Alsace) / Saïf-Eddine KHAOUI (80' - SM Caen) / Rémi OUDIN (64' - Stade de Reims) / Nicolas PEPE (90' +6 pen - LOSC) Cartons rouges/exclusions : Marcus THURAM (EA Guingamp)
Lalao efatra isan’andro isam-bondrona no voafaritry ny Federasiona iraisam-pirenena amin’ny baolina kitra na FIFA momba ny fandaharampotoana amin’ny dingana famaranan’ny fiadiana ny amboara eran-tany na Mondial hatao any Qatar, amin’ny 21 novambra hatramin’ny 18 desambra 2022. Omaly no namoahan’ny FIFA an’ireo fandaharan-dalao rehetra. Hanomboka amin’ny 1 ora tolakandro (ora eto Madagasikara) ny lalao voalohany, raha amin’ny 4 ora ny faharoa, ary amin’ny 7 ora hariva sy amin’ny 10 ora alina ireo lalao roa farany mandritra ny lalaom-bondrona. Amin’ny 6 ora hariva sy amin’ny 10 ora alina kosa ireo dingan’ny famaranana, manomboka eo amin’ny dingan’ny ampahavalondalana, raha amin’ny 6 ora hariva ny lalao famaranana. Hotontosaina, amin’ny 1 ora tolakandro, ao amin’ny kianja Al Bayt ny lanonampanokafan’io fifaninanana maneran-tanin’ny baolina kitra io, amin’ny 21 novambra 2022. Ao amin’ny kianjan’i Usail kosa no hanaovana ny lalao famaranana, amin’ny 18 desambra 2022. Kianja roa ambin’ny folo no handraisan’i Qatar an’ireo lalao rehetra amin’io andiany faha-22 amin’ny Mondial io, miaraka amin’ireo firenena roa amby telopolo mpandray anjara. Amin’ny volana marsa 2022 no hanaovana ny antsapaka amin’ny fizaràmbondrona valo. Antsapaka Isan’ireo firenena hikatsaka ny tapakilan’izao dingan’ ny famaranana izao ny Barean’i Madagasikara. Miray vondrona J amintsika ny RD Congo, Benin ary Tanzania, taorian’ny antsapaka novitaina tany Le Caire (Ejipta). Ireo ekipa folo mitana ny laharana voalohany isam-bondrona no miatrika ny lalao sakana mandroso sy miverina, ary ireo dimy tafavoaka no hisolo tena ny Kaontinanta Afrikana amin’ny Mondial 2022. Na dia efa voafaritra tamin’ io antsapaka io aza ny fandaharam-potoana dia nokorontanin’ny valanaretina Covid-19 izany. Andrasana ny fandaharan-dalao vaovao avoakan’ ny kaonfederasiona CAF. L’article Baolina kitra maneran-tany :: Namoaka an’ireo fandaharan-dalaon’ ny Mondial 2022 ny FIFA est apparu en premier sur AoRaha.
Loza mitatao: 5000 ha isan-taona ny ala honko simba
Nankalazaina tany Mahajanga, ny faran’ny herinandro, teo ny Andro iraisam-pirenena momba ny ala honko. « Manarina ala honko manatsara velon-tena, ary mitsinjo ny taranaka ho avy ». Izay ny lohahevitra nentina nandritra izany fankalazana izany ho fanomezan-danja ny ala honko iankinan’ny sehatry ny jono sy ny tontolo iainana. Tsy vitsy, ankehitriny, ny manapotika io karazan-kazo io avadika saribao, eo koa ny fijinjana azy avadika ho hazo fampiasa fanamboaran-trano any amin’ny morontsiraka. 5000 ha isan-taona ny ala honko simba.Laharam-pahamehana napetraky ny minisiteran’ny Fambolena, ny fiompiana, ny jono, ny manarina ny simba. Nanaovana atrikasa io fotoana io niarahana tamin’ny minisiteran’ny Tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy, orinasa mpanjono, mpanjono madinika, ivontoerana momba ny fikarohana samihafa. Nangonina ny ventin-kevitra avy amin’ireo rehetra ireo, hamolavolana fehin-kevitra ho fiarovana ny tontolo an-dranomasina, ho fiarovana ny harena an-dranomasina. R.MathieuL’article Loza mitatao: 5000 ha isan-taona ny ala honko simba a été récupéré chez Newsmada.